'एमसीसी बैठक बहिष्कार पो भएछ !’ - Nepal Samaj
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार बोलाएको बैठक सर्वदलीय नभई एमसीसी बैठकको भएको बताएका छन् ।
आइतबार ट्वीट गर्दै भट्टराईले बैठकमा आफ्नो पार्टीलाई निम्ता नआएको र चेइ नभनी कुकुर पनि कसैको घरमा नजाने बताए । उनले लेखेका छन्, ‘चेइ नभनी कुकुर पनि कसैको घर जाँदैन रे ! मिडियाबाट सुनिएको कथित सर्वदलीय बैठकमा प्रम निवासको मिठोमसिनो उदरस्थ गर्न पाइएला भनेर त्यत्तिकै हाम्फालेर जाने कुरा भएन । जसपाको आधिकारिक केन्द्रीय कार्यालय बालकुमरी,ल.पु.मा सोध्दा कुनै जानकारी थिएन । पछि मिडियाबाटै सुनियो–ःएमसीसी बैठक बहिष्कार पो भएछ !’
शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा बैठकमा कांग्रेस, राप्रपा र मजदूर किसान पार्टीका नेताहरु भने सहभागी भएका थिए । नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षका नेता, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र भट्टराई भने उपस्थित भएका थिएनन् । उनीहरुले आफ्नो पार्टीलाई निम्ता नआएको यसअघिनै बताएका थिए ।
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो भने बैठकमा गएका थिए । ठाकुर र महतो ओली सरकारलाई साथ दिने पक्षमा छन् भने भट्टराई र यादव भने ओलीको विपक्षमा छन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी सभामुखका कारण रोकिएको भन्दै एमसीसी अघि बढाउन सहमति जनाउन दलहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।